Warbixin: Musiibadii Zoobe iyo saameynta lama ilaawaanka ah ee hooyo Xaawo - Caasimada Online
Home Warar Warbixin: Musiibadii Zoobe iyo saameynta lama ilaawaanka ah ee hooyo Xaawo
Warbixin: Musiibadii Zoobe iyo saameynta lama ilaawaanka ah ee hooyo Xaawo
Muqdisho (Caasimada Online) – Iyadoo toddobaad laga joogo markii uu dhacay qaraxii lagu halaagsamay ee ka dhacay isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho, ayaa weli waxaa socda gurmadka loo fidinayo dhibanayaasha iyo dadkii ay dhibaatada kasoo gaartay.
Qaraxaasi ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa laga dhaxlay dhacdooyin xanuun iyo uur-kutaalo ku reebtay qoysas badan oo Soomaaliyeed.
Dadka uu saameynta ku yeeshay qaraxaasi waxaa kamid ah hooyo lagu magacaabo Xaawa Tahliil Gulleyd oo BBC-da u sheegtay in ilma ay dhashay iyo kuwa ay ehel yihiin ba ku weyday qaraxii Soobe xili ay ku guda jireen xisaabinta hanti u taalay labo carwo si ay uga bixiyaan sako.
”Hooyo waxaan weerarka ku waayay labo kamid ah wiilasheyda, mid aan habirir u ahay, mid ay qaraabo ahayeen ilmaheyga iyo xaaska mid kamid ah wiilasheyda oo carwa ku lahaa isgoyska Soobe,” sidaasi waxaa BBC-da u sheegtay hooyo Xaawo.
Xaawa Tahliil oo u muuqatay qof samarsan ayaa u sheegtay BBC-da in caruurta iyo hantida ku burburtay weerarka ay tahay wax uu Ilaahay siiyay, haatan uu isaga oofsaday.
Mar aan wax ka weydiinay darenkeeda, maadaama caruurteda ay ku dhinteen weerarka ayaa waxay tiri waxaan ku shukriyay Allah weyn, waxaana xiliga uu weerarka dhacayay ay sheegtay inay ku sugneed deegaanka Hobyo.
”Markii la isoo sheegay geerida ubadkeyga waxaan ku sugnaa deegaanka Hobyo, oo waxaan halkaasi la joogay waalidiinti idhashay, waxaana Xamar imid iyadoo caruurteydi la aasay” waxaa sidaasi BBC-da u sheegtay hooyo Xaawo.
Wasiirka warfaafinta Soomalaiya Eng. Cabdiraxman Cumar Cusmaan (Eng. Yarisow) oo shir jaraa’id ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in la xaqiijiyay in qaraxaasi ay ku dhinteen 358 qof iyo halka 228 qofna ay ku dhaawacmeen.